Umbuso weNtengiso yeKhonkco yokuThengisa | Martech Zone
Umbuso weNtengiso yeKhonkco yokuThengisa
NgoMvulo, Februwari 18, 2013 NgoMvulo, Juni 8, 2015 UJenn Lisak Golding
Ngayo yonke itekhnoloji ekhoyo ngoku, umxholo uyasetyenziswa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo nakwizixhobo ezininzi ezahlukeneyo. Ngelixa iidesktops kunye neetafile zibadlala kakhulu kumdlalo, izixhobo eziphathwayo zibonakala zinempembelelo enkulu kunqakrazo ngamaxabiso kunye nokukhangela. Ngo-2013, ukuthengiswa komxholo weselula kuya kuvelisa imbuyekezo enkulu kutyalo-mali ukuba lwenziwe kakuhle.
Siqokelele uphando lwethu iqonga kubloga yequmrhu umxhasi, isiHlomelo, kunye Inkqubo yokuthengisa nge-imeyile umxhasi, i-ExactTarget, ukubonisa ifuthe lokuthengisa okuhambahamba kule minyaka imbalwa idlulileyo kunye noko kusaza kuza. Xa yonke idatha idityanisiwe, bekukho iziphumo ezothusayo:
Amaxabiso avulekileyo kwizixhobo eziphathwayo anyuke nge-300% ukusuka ngo-Okthobha ka-2010 ukuya ku-Okthobha ka-2012.
Ifowuni ye-imeyile yenza uguquko oluphindwe kabini njengemisebenzi yasekuhlaleni okanye ukukhangela.
Iselfowuni isenokungathethi “ekuhambeni.” I-51% yabasebenzisi baseMelika abasebenza ngokukhangela, ukukhangela kunye nokuthenga kwizixhobo eziselfowuni ekhaya.
Ukutyelelwa kwewebhu kwiselfowuni okanye kwithebhulethi kuphezulu ngoLwesine nge-15.7%.
Imiyalezo yokuthengisa nge-SMS iya isiba yinto ethandwayo, nge-31.2% yeearhente zisebenzisa eli qhinga ukwandisa ukucofa.
Injani imeko yokuthengisa umxholo oselfowuni? Ngena kumdlalo, okanye uphulukane nethuba lokucofa ii-throughs, ukuguqulwa, kunye nokuzibandakanya.
tags: uqhagamshelwanoukuthengisa umxholo weselfowunizixhoboukuthengisa ii-smsImiyalezo yokuthengisa ngeSMSamacwecwe
Iindlela ezimfutshane zokubhala ngo-501 ngu-Amy Harrison
Ngaba Ukutshintsha Kwefaneli Yokuthengisa?
Feb 18, 2013 ngo-9: 22 AM
Ixesha elivulekileyo le-imeyile phakathi kwenguquko yeselfowuni kunye nedesktop inomdla! Kubonakala ngathi sitsibela kwiscreen sethu esikhulu kusasa kodwa emva koko siqale kancinci ukubuyela kwifowuni. Wowu!
Feb 18, 2013 ngo-2: 51 PM
Kuyinyani, Doug. Ndamangaliswa yindlela esisebenzisa ngayo iselfowuni ukukhangela (hayi i-SMS) imisebenzi ekhaya.
Feb 19, 2013 ngo-4: 07 PM
Hayi uJenn, ezinye izibalo ezinomdla apha, ziyayithanda. Ndibuze umbuzo malunga noku kwi-SES London kunyaka ophelileyo, khawuzibuze ukuba luthini uluvo / uluvo lwakho:
Nangona ubona ukuba uguquko luphezulu kwizixhobo eziselfowuni zokuthenga kunye ne-ecommerce, ndiyazibuza ukuba zibukeka njani izibalo zokuba zingaphi ezivulekileyo / ezifundwayo ze-imeyile kodwa zitshintshe kwi-desktop, ke ngoko usebenzisa amanqaku ngakumbi ekuchukumiseni uguquko (yenza kube nzima Ukulandela?). Vuyisa -Russell
Feb 20, 2013 ngo-1: 42 AM
Hayi Russell! Enkosi ngengcaciso yakho. Ndicinga ukuba ngumbuzo omkhulu lowo, kwaye ndingaphikisana nokuba indlela endiziphethe ngayo inokukubonisa oku (ukujonga kwifowuni, kodwa uthenga kwidesktop).
Andina manani aluncedo, kodwa ndiwujongile lo mbuzo ngaphambili. Nazi iingcinga zam (ngakumbi kumbono wengqondo yeshishini):
-Ukuba ukude nentuthuzelo yekhaya lakho okanye edesikeni, ndicinga ukuba utshintsho kwiselfowuni (ukuthengwa) yindlela ephezulu. Sikwiminyaka yokoneliseka kwangoko, kwaye ukuba siyayifuna, siyenza ngoku. Ukuba asifuni kuthenga kwangoko naphaya, sinokubekisa okanye sigcine ngandlela thile. Nangona kunjalo, ukuba asiyigcini njengemfuno efanelekileyo okanye ekufuneka siyenzile, siyakulibala kwaye singaze sibuye ngaphandle kokuba siqhubeka neebhukumaka zethu okanye isikhumbuzi. Uninzi lwamashishini e-B2C anesikhumbuzo se-imeyile ukuba sibeka into kwinqwelo yokuthenga, kodwa ndingathanda ukuqikelela ukuba ukuba asithenganga kwiselfowuni ngoko nangoko, siza kuyithenga kwidesktop. okanye, ngelishwa umthengisi, asiyi kuthenga konke konke.
-Ukusuka kwindawo yokulandela umkhondo, kulapho ukuthengisa okuzenzekelayo kungena khona. Kukho izixhobo ezikuvumela ukuba ulandelele abathengi bakho ngokubrawuza imikhwa kunye nokwenza iprofayili yomthengi. Ukuba babengabathengi bangaphambili, oku kulula kakhulu ukwenza. Kungabanzima ngakumbi ukuba abakahlelwa njengamathemba kwinkqubo yakho.
-Ingaba amanqaku amanqaku achukumisayo enza kube nzima ukulandela uguquko? Ewe. Ngokuqinisekileyo. Kodwa ngaba oko kuthetha ukuba akunakwenzeka? Hayi-sidinga nje izixhobo eziphambili kunye nezixhobo ezinikezelweyo ukuze sikwazi ukuhamba ngokukuko emsebenzini. Oku kuyabiza, kodwa ukuphela kosuku, kuya kuthi kuncede ekugcineni kunye nokunyaniseka.
Ke, iyonke, hayi, andinazo izibalo kuguquko xa kuthelekiswa nokukhangela kwiselfowuni kunye nethebhulethi, emva koko kuguqulwa kwidesktop, kodwa ukulandelela indlela yokuziphatha kwabaxumi ngokuthengisa izinto ezenzekelayo kufuneka kuncede oku. Enkosi! Ukuba ungathanda enye incoko, nceda uzive ukhululekile ukufikelela kwi-Twitter: @jlisak.